Fampahafantarana Bebe Kokoa Momba Ny Fitazonana An’i Abdolkarim Suleiman · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2018 11:35 GMT
Avy any Kairo, toerana hanaovany ezaka maro momba ny zon'olombelona no anoratan'ny namantsika Elijah Zarwan. Vao avy tany Aleksandria izy nihaona tamin'i Mohammed Morsi sy Malek Moustafa, egiptiana mpitoraka bilaogy izay niasa mafy tamin'ny fanadihadiana ny fisamborana sy ny fitazonana an'i Abdolkarim Suleiman. Elijah, Mohammed, Malek ary mpiaro ny zon'olombelona anankiray no nihaona tamin'ny fianakavian'i Suleiman, niezaka ny hahafantatra bebe kokoa momba ilay raharaha – eto ambany manaraka eto ny tatitra sy ny fanadihadiana ny zava-misy nataon'i Elijah.
Efa nandefa lahatsoratra momba ny fitazonana an'i Suleiman izahay tany aloha, toy ny -Justice for Abdolkarim (Rariny ho an'i Abdolkarim) sy ny Egyptian Blogger Taken in Detention ( Bilaogera Mpitoraka Bilaogy Egiptiana Nofonjaina).
soratra, na fomba hafa, ny fisainana mahery fihetsika mikendry ny handrisika fikomiana sy fisarantsarahana na hanambany na hanao tsinontsinona ny iray amin'ireo ‘ fivavahan'ny lanitra’ [i.e Silamo Kristiana, Jodaisma] na ireo antokom-pivavahana nisintaka tamin'izany, na manohintohina ny firaisam-pirenena na ny filaminana ara-tsosialy”). Manaiky ny mpiaro an'i Suleiman fa ny lahatsorany tamin'ny 22 Oktobra dia manivaiva ny silamo ary raha raisina ny zavamisy momba ny adin'antokom-pinoana ao Aleksandria, dia azo adika hoe ‘ fanohintohinana ny firaisam-pirenena sy ny filaminana ara-tsosialy” .